Activate kana kumisa kutumirwa kwekunyorera maresiti kune ako kufarira | IPhone nhau
Ita kuti basa riite kana kuti risabvisa kutumirwa kwemari yekunyorera kwaunoda
Tine zvakawanda zvinowedzera kunyoreswa kune ese marudzi emasevhisi kana kunyorera uye zvakanaka kuve nekutonga kwavo. Kutanga tichataura kuti kutonga uku kunogona kunakidza vashandisi vazhinji uye kunogona kuitwa kubva ku iPhone yedu nekutadza. Zvinogoneka kuti vanopfuura mumwe wenyu vatomboziva nezvekuvapo kwesarudzo iyi, asi vamwe vangasadaro uye nekudaro zvakanaka kujekesa kuti kutumira maemail nemarisiti ekunyorera kwedu kunogona shandisa kana kurega kushanda kune zvatinoda.
Kunyangwe iri kubva kuApple Music, Apple Arcade kana kunyangwe kubva kune maapplication ane sarudzo dzekunyorera, mukana wekumisa kana kumisa kutumirwa kwemarisiti kuri nyore kwazvo kuita. Mumatanho anodarika matatu Tinogona kugadzirisa iyi sarudzo inowanikwa mune yedu nhoroondo.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuwana iyo Zvirongwa> yedu Apple ID, kumusoro uyezve mune sarudzo Subscriptions. Pamusoro tinowana sarudzo yakamboshanda kushandura kutumirwa kwemarisiti ekunyorera kwedu.
Kana zvangomiswa, zvatinozadzisa kungobvisa zviziviso izvi, kunyangwe zvichinyatsotsanangurwa murugwaro rwezasi, marisiti ezvekutenga izvi anogara achichengetwa mu "Nhoroondo Yekutenga". Rangarira zvakare kuti isu tinokwanisa kubata kunyoreswa kubva kune yega yega muchikamu chimwe chete. Kune vese avo vane Apple TV + yemahara yekutenga yeApple chimbo rangarira kuti haufanire kumisa kunyoreswa kusvika gore remahara rapfuura kana tikadaro, ticharasikirwa nekuwana bvunzo panguva iyoyo chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ita kuti basa riite kana kuti risabvisa kutumirwa kwemari yekunyorera kwaunoda
Maitiro ekumisikidza iyo "Kudzoreredza Mode" pane iyo iPad ine Chiso ID
Iyo Galaxy S20 uye Galaxy Z Flip mabheti matsva eSamsung e2020